gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem]
1 gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem] on 26th February 2010, 11:18 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုတဲ့ မေလ်း ပါ။အရေးကြီးတဲ့ စာတွေပါနေလို့ပါ။ ကူညီကြပါဗျာ။
2 Re: gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem] on 27th February 2010, 7:48 am
Security Question (or) Recovery email သိရင်တော့ လွယ်လွယ်ကူပြန်ယူလို့ရပါတယ်။
အဲလိုမှမဟုတ်ဘဲ ဟက်ဖို့ဆိုရင်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ (မရဘူးလို့ပြောဘူးနော် ကျွန်တော်မရတာတော့သေချာတယ်)
3 Re: gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem] on 27th February 2010, 4:20 pm
forgot your password နဲ ့မရဘူးလား။ တကယ်မေ့သွားဟုတ်တယ်နော်။ ဟီး..ဟက်ချင်လို ့လားလို ့။ စိတ်ဆိုးနဲ ့နော်။
4 Re: gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem] on 27th February 2010, 4:26 pm
ကို satsoepiang ရေ
အဲ့ဒီ gmail acc မရှိဘူးတဲ့။ ပြန်ကြည့်ပေးပါဦး။ စာလုံးပေါင်းများမှားလို ့လား။
5 Re: gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem] on 27th February 2010, 5:25 pm
satsoepiang wrote: [You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုတဲ့ မေလ်း ပါ။အရေးကြီးတဲ့ စာတွေပါနေလို့ပါ။ ကူညီကြပါဗျာ။
၁- ကျွန်တော်တို့ Forum သည် Hacking ဖိုရမ် မဟုတ်ပါ။
၂- ~Online Community ဟူသည် မည်သူ့ကိုမျှ ယုံလို့မရပါ~ ဆိုတဲ့ စကားကို မှတ်သားထားပါ။ Forum ပေါ်တွင် ရင်းနှီးနေသူတို့သည် အပြင်မှာမသိသမျှတော့ အရမ်းမယုံသင့်။ မိသားစုလိုနေတာနေတာဘဲ။ တအားတော့ မယုံလိုက်ပါနဲ့။ အဲဒီ့တော့ ဒီက အစ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုလည်း ယုံတဲ့သူ ရှိပါ့မလား? ၉၉% ကတော့ ယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ သူများ Mail ကို လိုချင်တယ်ဘဲ ထင်နေမှာပါ။
အဲဒီ့တော့ အပြင်မှာသိတဲ့ လုပ်နိုင်မယ့်သူတစ်ယောက်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းတာ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
၃- တကယ် Recover လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တော့ အခြား ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ Information ထည့်နိုင်ရင်တော့ ပြန်ရပါလိမ့်မယ်။ (ကိုယ့် Mail မဟုတ်ဘဲ ခိုး ချင်တာဆိုရင်တော့ ... )
၄- ဒီလိုမျိုးက ကူညီရအခက် ၊ မကူညီလည်း အခက်။ တကယ်အခက်တွေ့နေတဲ့သူမျိုးကိုတော့ ကူညီသင့်တာ။ (ဒါပေမယ့် ယုံကြည်ရမှဖြစ်ဦးမှာ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလည်း paypal တွေပါ ပါတဲ့ acc Pw မေ့သွားဖူးတယ်။ သူက အိမ်ကသုံးတာဆိုတော့ Remember PW လုပ်ထားတာ။ စက်လည်း Format ချရော ၊ PW ပါပြောင်။ သူလည်း မေ့။ တော်တော်ပြန်ရှာလိုက်ရသေးတယ်။)
နောက်ပြီး။ ဒီပုံပြင်လေးလို ဖြစ်နေဦးမယ်နော်...
Last edited by Fox on 7th August 2011, 3:04 am; edited3times in total (Reason for editing : Link ပြင်လိုက်ပါတယ်။)
6 Re: gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem] on 28th February 2010, 7:43 pm
ထက်နိုင် wrote: ကို satsoepiang ရေ
ဘာလို ့လဲဆိုတော့ ကျနော် အဲဒီအကောင့်နဲ ့signup လုပ်တာမရလို ့..ဟီးဟီး..
Secondary email ရှိရင် ပြန်ယူလို ့ရတာတော့သိတယ်
ဒါပေမဲ့..အရေးကြီးစာတွေရှိနေတဲ့ Mail password ကိုမေ့စရာလားဗျာ
7 Re: gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem] on 2nd March 2010, 9:17 pm
8 Re: gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem] on 8th May 2010, 1:48 pm
တည်နေရာ : amarapura
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-05-08
[You must be registered and logged in to see this image.] သိတော့သိတယ် ပြောရင်လဲသူများမေးဟက်ရင်ပြသနာနော် နောက်ပြေမယ် စောင့်နော်
9 Re: gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem] on 16th July 2010, 8:03 pm
passowd ယူတဲ့ (portable) ဆော့ဝဲလ်ညီ့မှာရှိပါတယ်အစ်ကို။အောက်ကစာကိုဖတ်ပြီးလုပ်ကြည့်ပေးပါ။
ချင်ရင်တောShowpassword ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ထွက်ကျလာပါမယ်။
ဒီမှာဒေါင်းပါ/ GooglePasswordDecryptor ဒီစာကိုရှာပြီးဒေါင်းပါ။ပေါ်တေးဘဲပါအစ်ကို
10 Re: gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem] on 29th July 2010, 9:07 pm
တည်နေရာ : ၿမိ္တ္ၿမိဳ႕
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-07-28
gmail account လျှောက်တာတော်တော်နဲ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ညီလေးကို အကြံပေးပါဦး...ဘွာတေး ]"
11 Re: gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem] on 8th August 2010, 9:50 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-08-03
12 Re: gmail password မေ့သွားလိ့ပါ [Problem]